Maareeyaha Dekada Berbera Ma Masuul Qaran Mise Gacan Yare Shirkada Dp-world u Adeega | Marsa News
Maareeyaha Dekada Berbera Ma Masuul Qaran Mise Gacan Yare Shirkada Dp-world u Adeega
September 13, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Aqoonta maamulka iyo maareynta dekaduhu maaha mid sahlan oo qofkasta loogu igman karo qaran, waa mid u baahan aqoon iyo waayo-aragnimo fahan xeel-dheeri lihi hagayo.
Maareeyaha dekada berbera Md, Siciid oo isaga ay xukuumadii madaxwayne silanyo u magacawday maamulida dekada berbera islamarkaana xukuumada haatan talada dalka haysa ee madaxwayne biixi na halkiisi ku daysay iyadoo maamulka dekadaasi shirkada Dp-world la wareegtay balse somaliland uu u qaabilsan yahay dhankeeda maareeye siciid, ayaad mooda in aqoontii iyo fahankii hawsha qaranku u igmaday aanu haba yaraatee lahayn.
Cabasho iyo tabashooyin badan oo waxaad arkaysa ganacsatada dekada berbera wax kala soo degaa ay ka muujinayaan shirkada Dp-world oo iyadu guud ahaan ba iska maamulata dekadii oo siday doonto ka yeesha, halka uu dayacaasi ka yimidna ay tahay doorkii maareeye siciid oo meesha ka maqan iyo waliba isagoo isu haysta inuu u shaqeeyo shirkadaasi oo sida wal ee ay jecel yhiin ba ugu adeega awaamiirtoodana ugu dhaga-nugul.
Waxa iswaydiin mudan ogaalka uu u leeyahay guud ahaan hawlaha dekada waayo? waxa inta ugu badan aad arkaysaa isagoo kuba sugan hargaysa oo shaqadii iyo hawshii qaranka uu u hayayna aaminsan in Dp-world qabanayso, taasi oo ka marag kacaysa inuu na fahansanayn doorka maamulka dekada uu ku leeyahay iyo sida awoodihiisa shaqo ay yihiin ba.
Ugu danbayntii waxa aanu qarankani ka maarmayn ragii aqoonta iyo waayo-aragnimada u lahaa shaqadan loo dhiibay inankan aan waxba ka garanayn hawsha uu hayo, si qaranku u helo habsami u socod maamul oo hanaan togan kula macaamila ganacsatada iyo shirkada haatan qaybta ka ah maamulka dekada.